Kubadda Somali Sport Portal > News > Basketball
Kulan kubadda kolayga ah oo aad u qiimo badnaa ayaa uu dhexmaray laba kooxood oo dhalin yaro da’doodu u dhaxaysay 16 ilaa iyo 19 sano jir, kuwaas oo ka kala socday magaalooyinka Leicester iyo London. Kulankan ayaa waxaa soo abaabulay maamulka dhalinta cuslaatay ee kubadda kolayga deegaankoodu yahay London oo la kaashaday dhigooda ku dhaqan magaalada Leicester.
Cumar A/dir BAARAJAB iyo Siciid Faarax Ducaale oo la ciiday bahda K. Kolayga London.
Waxaa xalay magaalada Mogadishu ku geeriyootay Hooyo Faadumo Jaamac Jimcaale (Faadumo Shanle) oo ahayd Hooyadii dhashay laacibkii kooxda kubadda cagta iyo kolayga naadigii Jeenyo ama LL PP C/Laahi Cilmi Ereg (Xaaji). AUN maamada ayaa baeryahaan danbe xanuun yar yar hayay. Waxaa geerida Hooyo Culumo Xuseen ka naxay dhamaan Bahda Isboortiga, waxaana halkan tacsi uga diraya Dhamaan kooxdii Jeenyo, Guddiga Olombikada Soomaaliyeed, xiriirka Kubadda Cagta, xiriirka Kubadda Kolayga, xiriirrada kala duwan iyo Bahda Isboortiga,
Wareegto uu soo saaray Gudoomiyaha cusub ee XSKK C/laahi Nuur Maxamed (Cadaani) dhawaan ayaa uu ku cadeeyay in Axmed Muuse Xuseyn loo doortay lataliyaha gudoomiyaha XSKK iyo maamulka dhamaan xulalka Qaranka kubadda koleyga Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay si loo gaaro horumar iyo talaabo hor leh in la helaa aqoon yahano leh xirfadda, aqoonta iyo maamulka kubadda kolayga